Dutchtown မြို့၏အိမ်နီးချင်း Beautification Service Program • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Dutchtown's New Neighborhood Beautification Service Program
အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 17th, 2021
အဆိုပါ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် နှင့် Dutchtown ပင်မလမ်းများ အလုပ်ရှင်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးရောင်းချသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာအခြေပြုအိမ်နီးချင်း Beautification Service အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုစတင်မည်ကိုကြေငြာရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု။ Dutchtown CID မှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသောဤအစီအစဉ်သည် Dutchtown ၏အဓိကလမ်းမကြီးများကိုသန့်ရှင်းစေရန်ရပ်ရွာသို့ပြန်ပေးနေစဉ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
“ Dutchtown Community Improvement District တက်ပြီးအပြေးလာတဲ့အခါမှာပုံမှန်အမှိုက်သယ်ဆောင် ၀ န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေကိုစိုစွတ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွန်ဒေါ်လာကိုဒီထက်ပိုပြီးတိုးချဲ့ဖို့နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်တဲ့မော်ဒယ်တစ်ခုကိုမျှော်မှန်းဖို့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တကယ်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥက္ကဌ Joel Silliman ကပြောကြားခဲ့သည် Dutchtown ပင်မလမ်းများဒီဇိုင်းကော်မတီ။ ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နေရာချထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းများကိုသန့်ရှင်းစွာထိန်းသိမ်းရန်၊ ဒီမှာနေထိုင်သောသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်မျှတသော ၀ င်ငွေအဆင့်လစာပေးသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Dutchtown Neighbourhood Beautification Service Program ၏နယ်ပယ်ကို Dutchtown Main Streets Design Committee တွင်အမှုဆောင်နေသောရပ်ကွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကတီထွင်ခဲ့သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်သည်အမှိုက်သံဗူးများနှင့်အမှိုက်သရိုက်များအားပုံမှန်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် Dutchtown CID ခြေရာ Virginiat ရိပ်သာလမ်း၊ Meramec လမ်းနှင့် South Grand Boulevard တို့ကို Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
အဆိုပါပရိုဂရမ်သည် Dutchtown ရပ်ကွက်မှဒေသခံအလှအပရေးရာလုပ်သားများကိုတစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၁၅ ဒေါ်လာဖြင့်အလုပ်ခန့်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤလူထုအခြေပြုပုံစံသည်စင်ကြယ်သောလမ်းများကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးရပ်ကွက်မှလူများကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်ခန့်ထားကာမျှတသောလုပ်ခပေးသည်။
Neighbourhood Beautification Service Program အတွက်ရောင်းချသူကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတောင်းခံမှုနောက်တွင် Employment Connection ကိုကန်ထရိုက်ပေးအပ်သည်။ စိန့်လူးဝစ္စမြို့၏ရွေးချယ်ထားသည့်ပံ့ပိုးသူအဖြစ် Employment Connection သည် Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လက်ရှိဆက်သွယ်မှုရှိသည် Dutchtown ရှိအကြမ်းဖက်မှုကုသရေးအစီအစဉ် နှင့်ဒေသခံများအားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်နှစ်ရှည်လများသမိုင်းကြောင်း။ Dutchtown အလှအပဆိုင်ရာလုပ်သားများကိုအလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Dutchtown Community Improvement District မှရန်ပုံငွေများအပြင် US Bank သည်၎င်းမှတစ်ဆင့်ငွေရေးကြေးရေးထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ပေးနေသည် အမေရိကန်ဘဏ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရန်ပုံငွေ Dutchtown ကဲ့သို့သောပစ်မှတ်ထားသောရပ်ကွက်များ၌အလုပ်အကိုင်သင်တန်းများပံ့ပိုးပေးရန်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Employment Connection ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ လူသားများအတွက် HabitatDutchtown တွင်စိန့်လူးဝစ်၏ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်၊ သတ်မှတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုခြေရာတစ်လျှောက်အမှိုက်များကိုဖယ်ရှားရန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးရန် Employment Connection နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဒတ်ခ်ျတောင်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရှိန်အဟုန်များစွာရှိပြီးအောက်ခြေလူတန်းစားအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးတက်လာသည်။ ဒီပန်းတိုင်က Dutchtown အတွက်သာတူညီမျှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေမည့်စီမံကိန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဒေသတွင်းပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအလှပဆုံးအစီအစဉ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်” ဟု Dutchtown Main Streets ဥက္ကPresident္ဌ Nate Lindsey ကပြောကြားခဲ့သည်။
သင်သို့မဟုတ်သင်သိသောတစ်စုံတစ် ဦး ကအချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက်ဆုတောင်းနေသလား။ Employment Connection ၏အိမ်နီးချင်း Beautification Team သို့ဆက်သွယ်ပါ။ ကြီးကြပ်ရေးမှူးရာထူးများသည်တစ်နာရီလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ နှင့်စတင်သည်။ တစ်နာရီလျှင်ဒေါ်လာ ၁၅ ဖြင့်စတင်သည်။ သြဂုတ်လမှ စ၍ တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၁၅ နာရီမှ ၂၀ နာရီအထိအလုပ်များကြသည်။ Employment Connection သည် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းမှငှားရမ်းရန်အထူးသဖြင့်ကြိုးစားသည်။
The Neighborhood Beautification Team မှအလုပ်သမားများအား၎င်းတို့၏ရပ်ရွာအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အားလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော Dutchtown တည်ဆောက်ခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ Neighborhood Beautification Service Program က Dutchtown ကိုနေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့် visitors ည့်သည်များအတွက်သန့်ရှင်းပြီးဘေးကင်းသောရပ်ကွက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးသည်။
လျှောက်ထားရန်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာတစ်စောင်ပို့ပါ smartinez@employmentstl.org။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရာထူးနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကသင်ဖုန်းဆက်နိုင်သည် (314) 333-5622။ Employment Connection သည်နောက်ခံနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောတန်းတူအခွင့်အရေးရှိသောအလုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
အောက်မှာ Filed Dutchtown CID. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် Dutchtown ပင်မလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 17th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown CID Dutchtown's New Neighborhood Beautification Service Program